Otu esi etinye ndị ọkwọ ụgbọ ala Nvidia kacha ọhụrụ na Fedora 35 & Gnome 41 - LinuxCapable
Otu esi etinye ndị ọkwọ ụgbọ ala Nvidia kacha ọhụrụ na Fedora 35 & Gnome 41
November 4, 2021 October 10, 2021 by Jọshụa James
Bubata ebe nchekwa RPM Fusion
Nyochaa nwụnye Nvidia Drivers
Usoro nhọrọ – Wụnye ọkwọ ụgbọ ala
Otu esi emelite ndị ọkwọ ụgbọ ala Nvidia
Otu esi ewepu Nvidia ọkwọ ụgbọ ala wee tụgharịa azụ
Nvidia 495.xx ndị ọkwọ ụgbọ ala beta
Ọtụtụ sistemụ desktọpụ Linux ọgbara ọhụrụ dịka Fedora bia na a Nvidia ọkwọ ụgbọala etinyegoro na mbụ Ọhụrụ Onye na-anya ngwaọrụ eserese mepere emepe maka kaadị vidiyo Nvidia. Maka ọtụtụ akụkụ, nke a bụ ihe a na-anabata; Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na-eji sistemụ Linux gị maka imepụta eserese ma ọ bụ egwuregwu, ị nwere ike nweta ndị ọkwọ ụgbọ ala ka mma.
N'ime nkuzi na-esonụ, ị ga-amụta ka esi etinye Nvidia Graphic Drivers site na Nvidia Proprietary Repository, na-enye gị ihe kachasị ọhụrụ na ngwanrọ dị.
Tupu ịga n'ihu na ntinye nke Nvidia Drivers, mee iwu na-esonụ iji wụnye ma ọ bụ lelee na ngwugwu dnf-plugins-core arụnyere na desktọpụ Fedora gị.
Site na ndabara, dị ka ọtụtụ nkesa Linux, Fedora anaghị eso ndị ọkwọ ụgbọ ala Nvidia. Ugbu a, ụzọ kachasị mma iji wụnye ndị a na Fedora 35 bụ iji ebe nchekwa RPM.
Nke mbụ, mepee ọnụ ọnụ gị wee tinye ebe nchekwa ndị a
Ngwakọta RPM efu:
Ngwakọta RPM enweghị n'efu:
Ozugbo emechara, megharịa ndepụta nchekwa gị.
Ugbu a ị bubatala ebe nchekwa RPM Fusion, mebie iwu a ka ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọ ala Nvidia kachasị ọhụrụ na sistemụ Fedora gị.
Mbụ, chọpụta kaadị eserese gị.
Na-esote, wụnye ngwugwu ndị ọkwọ ụgbọ ala eserese kacha ọhụrụ site na ebe nchekwa RPM Fusion.
Na-esote, wụnye nkwado ndị ọkwọ ụgbọala CUDA. Ekwesịrị itinye nke a, ma ọ bụrụ na awụ ya, nwere ike bute nsogbu.
Ozugbo etinyere ihe niile, ị ga-amalitegharị sistemụ Fedora gị. Na ndabara, nke a ga-ewepụkwa Ọhụrụ ndị ọkwọ ụgbọala na-akpaghị aka.
Ozugbo ịbanyela na sistemụ gị, ị kwesịrị ịnwe ugbu a n'oge nkuzi Nvidia Drivers ngwugwu 470.74 arụnyere. Ị nwere ike ịnwale nke a n'ụzọ dị iche iche; n'ọnụ ọnụ gị, pịnye iwu a:
N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ibunye Nvidia GUI site na ịgagharị na Ihe omume> Gosi Ngwa> Nvidia X Server ma ọ bụ pịnye iwu na-esonụ na ọdụ gị.
Ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na nrụnye aga nke ọma:
Dị ka n'elu, ọhụrụ Nvidia ọkwọ ụgbọ ala 470.74 na nke kacha ọhụrụ Linux Kernel 5.14 on Fedora 35 arụnyerela nke ọma.
Mara, RPM Fusion nwere ndị ọkwọ ụgbọ ala 495.44 ewepụtara ọhụrụ ugbu a na ndabara.
Maka ndị kwalitere Fedora ma chọọ ndị ọkwọ ụgbọ ala ochie ka anaghị akwado kaadị eserese ha na ngwugwu ọkwọ ụgbọ ala kacha ọhụrụ site na Nvidia. N'okpuru bụ ụfọdụ ndị ọkwọ ụgbọ ala nwụnye nhọrọ, rịba ama na anaghị emelite ihe ndị a, yana ntụpọ nchekwa nwere ike ịdị.
Ndị ọkwọ ụgbọ ala GeForce 400/500:
Ndị ọkwọ ụgbọ ala GeForce 8/9/200/300:
Mara, iwu ndị dị n'elu wụnye ma ndị ọkwọ ụgbọ ala nke Nvidia yana nkwado CUDA.
Mmelite niile ga-adị na usoro iwu ume ọhụrụ dnf, nke a ga-elele ebe nchekwa RPM Fusion maka mmelite yana ngwugwu Fedora ndị ọzọ.
Ka ịlele maka mmelite:
Ọ bụrụ na ịchọghị ịga n'ihu na-eji ndị ọkwọ ụgbọ ala Nvidia, jiri iwu a:
Nke a ga-ewepụ ihe ndabere niile arụnyere, na ozugbo ewepụchara, ị ga-amalitegharị.
N'oge reboot, usoro a ga-eme ka ọzọ Ọhụrụ ndị ọkwọ ụgbọ ala. Ị ga-ahụ ozi na-ekwu na ndị ọkwọ ụgbọ ala Nvidia ahụghị ndị ọkwọ ụgbọala Nouveau na-eme ka ọ dị mfe, na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịtụgharị azụ na azụ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Iji wụnye ndị ọkwọ ụgbọala beta kachasị ọhụrụ, ị ga-achọ ibudata na wụnye ọkwọ ụgbọala ndị a dị mgbagwoju anya karịa nke dị n'elu. Gaa leta nkuzi anyị Otu esi etinye Nvidia 495.xx Beta Drivers na Fedora 35. Cheta, RPM Fusion na-enweta ngwa ngwa na mwepụta ọhụrụ. Naanị wụnye ndị ọkwọ ụgbọala Beta ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi etinye ndị ọkwọ ụgbọ ala Nvidia ọhụrụ na desktọpụ Fedora gị site na iji ebe nchekwa RPM Fusion. Dị ka o kwesịrị, a ga-eji ndị ọkwọ ụgbọala beta ndị a naanị ma ọ bụrụ na ị nwere kaadị eserese nhata nke ga-erite uru na ngwugwu ọkwọ ụgbọala ọhụrụ na sistemụ egwuregwu. Nkezi onye ọrụ desktọpụ kwesịrị ichere ka ndị ọkwọ ụgbọ ala a nwere ike iweta enweghị ntụkwasị obi.
Categories Fedora Tags Fedora 35, GNOME, Nvidia Mail igodo
Echiche 14 na "Otu esi etinye ndị ọkwọ ụgbọ ala Nvidia kacha ọhụrụ na Fedora 35 & Gnome 41"
October 12, 2021 na 3: 19 pm
Ntuziaka zuru oke, nkenke. Ọ were m naanị ~5mins na-eso ntuziaka a. Ọ ga-ekwe omume iji ndị ọkwọ ụgbọ ala Nvidia mee nnọkọ Wayland?
October 16, 2021 na 7: 10 pm
Daalụ maka nzaghachi m nwere ekele maka ya.
Usoro a bụ maka Xorg (X11). Amaara m na ọtụtụ ndị chọrọ iji Wayland, mana site na ihe m gụrụ ya ka ọbụnadị 470 ka nwere nsogbu na ndakọrịta site na ihe m ghọtara.
Enwere ike ime ya, mana enwere usoro ndị ọzọ metụtara. Ekwesịrị m imelite nke a otu ụbọchị na usoro ahụ.
November 2, 2021 na 10: 17 pm
Ihe adịghị mma. Mgbe ị wụnye 35 ma soro ntuziaka gị, ihe niile dị ka ọ dị mma. Mgbe ahụ n'echi ya, a kpaliri m imelite ndị ọkwọ ụgbọala NVIDIA ọzọ site na repo na-enweghị n'efu. Emere m nke ahụ, ugbu a Fedora kwuru na sistemụ m na-agba ọsọ na-enweghị ngwa ngwa ngwa vidiyo. Nsonaazụ sitere na nvidia-smi “Ejighị ibido NVML: ọdịghị ekwekọ ụdị ọkwọ ụgbọ ala/ụlọ akwụkwọ”.
November 2, 2021 na 10: 27 pm
Ọ dị mma, tinyekwuo n'okwu ikpeazụ m. Nke mbụ, m mere ịmalitegharị mgbe nkwalite ahụ gasịrị (ọ bụrụ na ị na-eche). Ọzọkwa, biko mara na maka dnf “mmelite” bụ naanị aha ahapụrụ maka “mmelite”, ha na-eme otu ihe ahụ.
Yabụ, echere m na m doziri nsogbu m. Ewepụrụ m CUDA, tinyegharịa, wee malitegharịa. Ugbu a ụdị ọkwọ ụgbọ ala emelitere na enweghị ozi njehie. Nkwado NVIDIA na Fedora ka dị, n'ụzọ siri ike karịa ka o kwesịrị ịdị.
November 3, 2021 na 9: 41 am
Daalụ maka ozi ahụ. Emelitere m akụkụ nkwalite, chefuru nke ahụ.
Banyere ndị ọkwọ ụgbọ ala na Fedora, n'ihi na ọ bụ ntọhapụ ọhụrụ, chinchi abụghị ihe ijuanya ma e jiri ya tụnyere nkesa oge ochie nyere ọnụ ọgụgụ nkwalite na mgbanwe ọrụ n'ime ya. Enwere m ekele maka nzaghachi, ma ejiri m n'aka na ndị ọzọ nọ n'otu ụgbọ mmiri ahụ ga-emegharị ndị ọkwọ ụgbọala ma ọ bụrụ na ha na-eche nsogbu ndị yiri ya ihu. Otu ihe jọgburu onwe ya, igwe nyocha m emebeghị nke a ọbụlagodi na mmelite, dị egwu mana ọ dị mma.
M ga-emepụta nkuzi n'oge na-adịghị anya ka esi etinye ndị ọkwọ ụgbọala Nvidia & AMD Beta aka n'oge adịghị anya ozugbo Fedora 35 kwụsịrị.
Na-enwe ekele maka ozi ahụ ọzọ, nwee obi ụtọ.
November 4, 2021 na 7: 24 am
Nke a arụghị ọrụ. Na nmalitegharị ọ laghachiri na Nouveau.
November 4, 2021 na 10: 10 am
Daalụ maka ozi Austin.
M ehichapụrụ ma wụnye Fedora 35 ọhụrụ desktọpụ arụ ọrụ wee mee nkuzi ahụ ma enwetaghị m okwu a na ọ na-atụgharị azụ na Nouveau.
Amaghị m ihe mere n'okwu gị, na-enweghị nkọwa ọ bụla.
Ọzọkwa, RPM Fusion RPM arụnyere alaka ụlọ ọrụ Nvidia ọhụrụ 495.44, yabụ na ọ bụ 100% na ihe NVIDIA na-enye ugbu a.
November 18, 2021 na 5: 42 am
M gbasoro ntuziaka gị na desktọpụ F35 m na-agba Geforce GTX650 ma ọ dara. Ọ dị ka ọ na-ebulite ma wụnye nke ọma, agbanyeghị:
NVIDIA-SMI adaala n'ihi na ya na onye ọkwọ ụgbọ ala NVIDIA enweghị ike ịkparịta ụka. Gbaa mbọ hụ na etinyere ọkwọ ụgbọ ala NVIDIA kachasị ọhụrụ ma na-agba ọsọ.
November 18, 2021 na 6: 13 am
Ndewo, wmat daalụ maka ozi ahụ.
Ọ dị m nwute na ọ naghị arụ ọrụ, kaadị eserese NVIDIA gị emeela agadi ugbu a dị mwute ikwu, GTX650 dị ka site na 2011/2012 site na nlele ngwa ngwa, ma eleghị anya ọ bụghị na-ekwurịta okwu ebe ọ bụ na nkwado ahapụla. Ahụrụ m ụfọdụ posts ọgbakọ n'oge na-adịbeghị anya gbasara ndị mmadụ na-atụgharị azụ na 475.xx sitere na 495.xx karịa kaadị ochie anaghịzi arụ ọrụ n'oge na-adịbeghị anya.
Ọ ga-adị m mkpa ịgbanwe ya ma gbakwunye otu esi etinye ndị ọkwọ ụgbọ ala NVIDIA na Fedora. Agbanyeghị, echeghị m na njikọta RPM ga-edobe ihe ndị a, enwere m ike ịmepụta usoro ọhụrụ maka kaadị ochie.
Daalụ maka nzaghachi, m ga-eche maka ụzọ kacha mma na-aga n'ihu ma melite nkuzi n'oge na-adịghị anya.
November 18, 2021 na 11: 21 pm
Daalụ maka azịza. Rịba ama na ịnwa ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala 395xx nketa na-ebute:
[wmat @ conan ~] $ sudo dnf wụnye xorg-x11-drv-nvidia-390xx akmod-nvidia-390xx
[sudo] paswọọdụ maka wmat:
Lelee ngwụcha metadata ikpeazụ: 1:39:15 gara aga na Thu 18 Nov 2021 08:40:07 AM EST.
Nsogbu 1: ngwugwu kmod-nvidia-5.14.17-301.fc35.x86_64-3:495.44-1.fc35.x86_64 chọrọ nvidia-kmod-common>= 3:495.44, mana ọ nweghị onye na-eweta ọrụ nwere ike itinye ya.
– ngwugwu xorg-x11-drv-nvidia-390xx-3:390.144-2.fc35.x86_64 esemokwu na xorg-x11-drv-nvidia nyere site xorg-x11-drv-nvidia-3:495.44-4.fc_35.
- arịrịọ ndị na-emegiderịta onwe ha
Nsogbu 2: nsogbu na ngwugwu wụnyere xorg-x11-drv-nvidia-3:495.44-4.fc35.x86_64
– ngwugwu xorg-x11-drv-nvidia-390xx-3:390.144-2.fc35.x86_64 esemokwu na xorg-x11-drv-nvidia nyere site xorg-x11-drv-nvidia-3:470.74-1.fc_35.
- ngwugwu akmod-nvidia-390xx-3: 390.144-3.fc35.x86_64 chọrọ nvidia-390xx-kmod-common>= 3:390.144, mana ọ nweghị onye na-eweta ọrụ nwere ike itinye ya.
(gbalịa ịgbakwunye '-allowerasing' na ahịrị iwu iji dochie ngwugwu na-emegiderịta onwe ya ma ọ bụ '-skip-broken' ka ịwụpụ ngwugwu enweghị ike ịwụnye)
November 19, 2021 na 6: 42 am
Echere m na 470.xx na-edebe onye ọkwọ ụgbọ ala gị, 390 na-eme ihe ọ bụla na-eme agadi na m na-enwe obi abụọ na RPM ọ bụla ga-adị ogologo oge maka ya ọbụna RPM fusion nwere ike ịkwụsị nkwado.
Ọzọkwa, ị ga-ebu ụzọ wepụ ngwugwu 495.
sudo dnf wepụ '*nvidia*'
sudo dnf wụnye xorg-x11-drv-nvidia-470xx akmod-nvidia-470xx
sudo dnf wụnye xorg-x11-drv-nvidia-470xx-cuda #nhọrọ maka cuda ruo nkwado 11.4
Ọ bụrụ na nke a anaghị arụ ọrụ nwaa usoro 390 dịka ị nwara na mbụ.
M ga-eji 470 n'elu 390 n'onwe ya ka a ga-akwado ya ogologo oge.
Mee ka m mara otu o si aga.
November 20, 2021 na 12: 50 am
Daalụ Josh, atụgharịala m na ọkwọ ụgbọ ala 390 na ihe niile na-arụkwa ọrụ ọzọ.
November 23, 2021 na 4: 19 am
N'ikwu okwu n'oge adịghị anya, vidiyo agaghị egwu na ihe nchọgharị.
November 24, 2021 na 12: 41 pm
Nke a bụ ụdị 390 ma ọ bụ 470 wmat?